Admin Accounts | တောရက်စ် (mc)
Window7သုံးတဲ့အခါ Regular account ကိုပဲ အများအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ Admin account ကိုတော့ Window က auto hide ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့အခါ Admin account ကို ခေါ်ယူသုံးနိုင်ဖို့ ဖော်ထားချင်တဲ့အခါ ဖော်ရမယ့်နည်းလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ regular account ကနေ admin account ဖော်တဲ့နည်းလေးပါ။
1. Win+R ကနေ cmd လို့ရိုက်ပီး Ctrl+Shift+Enter ဒါမှမဟုတ် Right Click ထောက်ပြီး run as Adminstrator အနေနှင့် run လိုက်ပါ။
2. ပွင့်လာတဲ့ Command prompt မှာ net user administrator /active:yes လို့အတိအကျရိုက် ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
3. Log out လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Built in ပါပြီးသား Admin account လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာကတော့ regular account ကနေ admin ကိုဖော်တဲ့နည်းပါ။ ပြန်ဖျောက်ထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဆင့် (၂) ရောက်ရင် net user administrator /active:no လို့အတိအကျရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။ Log out လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ မူအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မည်။
Accounts များကို Auto Login လုပ်နည်း
အခုဆက်လက်ဖော်ပြချင်တာကတော့ စက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ password ခံထားသည်ပဲဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် မခံထားသည်ပဲဖြစ်စေ window logon ဆိုတာကြီးကို တွေ့နေရတဲ့အခါ အလိုလျောက် auto logon ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။ သိပြီးသား သူများအတွက်ကတော့ မလိုပါဘူး။ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လိုသလိုအသုံးပြူနိုင်ဖို့ပါ။
1. Start ကနေ netplwiz လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ။
2. User Accounts ဆိုတဲ့ Box လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။ ကျလာတဲ့ Box လေးထဲမှာ မိမိ auto login လုပ်ချင်တဲ့ အကောင့်ကိုရွေးပေး ရပါမယ်။ ကျတော်ကတော့ Admin account ကိုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုရွေးပြထားပါတယ်။
3. Box ထဲကမှ Users must enterauser name and password to use this computer ဆိုတဲ့နေရာလေးကို အမှန်ခြစ်လေး ဖြူတ်ပေးလိုက်ပါ။
4. Apply >> OK ဆိုရင် ရပါပြီ။
စာကြွင်း။ ။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလေးတွေကတော့ တော်တော်များများ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ သို့သော် မသိသေးတဲ့ အခြေခံ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်….. 😛
Posted by တောရက်စ် (mc) on July 31, 2012 in နည်းပညာများ.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တင်ပေးသမျှအားလုံးကတော့ ခုမှလေ့လာနေတဲ့သူအဖို့က ပညာတွေချည်းပါပဲ